तपाईले कस्तो फोन बोक्नु भएको छ ? हेर्नुहोस फोनमा आउँन सक्छ यस्तो समस्या ! – Sapana Sanjal
तपाईले कस्तो फोन बोक्नु भएको छ ? हेर्नुहोस फोनमा आउँन सक्छ यस्तो समस्या !
July 16, 2021 255
Sapana Sanjal : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजदेखि अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि जडान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को आयव्यय वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आजदेखि नेपालमा अवैध मोबाइल फोन नियन्त्रणमा आउने बताउनुभएको थियो ।
Prevअचानक किन रोकियो काठमाडौको खोप कार्यक्रम ? सूचना हेर्नुस्
Nextपाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, श्रावण २ गते शनिबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल